डोजरले बाटो खन्दा ढुङ्गामा गणेश भगवान देखिएपछि, अनिवार्य भिडियो हेरि कमेन्टमा ॐ लेखि सेयर गरौं – Aaj ko Sandesh
रु.५०० लिएर काठमाण्डौ छिरेका युवा २८ वर्षको उमेरमै करोडपति !
कुखुराको मासु इतिहासमै नसोचेको तरिकाले बढ्यो , एक केजीको कति ?
सरकारले वैशाखभरी विद्यालय बन्द गर्न भनेपछि प्याब्सनले निकाल्यो यस्तो विज्ञप्ती
म्याजिक भ्यान अनियन्त्रित भई कल्भडको डिलमा ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
बुढेसकालमा श्रीमतिले सा’री’रि’क स’म्ब’न्ध राख्न नदिएको भन्दै श्रीमानले घाँ’टी थि’चे’र ए’स्तो गरे छोरी मिडियामा (भिडियो सहित)
बिदामा घर आएका थिए तर कहिले नफर्किने गरी अ’स्ताए यी दुई युवा : गाउँने शो’कमा !
७५ बर्षिया यी बृद्ध महिलाले युवती र महिलालाई धन्दा गराउने गरेको खुल्यो यस्तो रहस्य! (भिडियो हेर्नुस्)
मुख्य पृष्ठ /News/डोजरले बाटो खन्दा ढुङ्गामा गणेश भगवान देखिएपछि, अनिवार्य भिडियो हेरि कमेन्टमा ॐ लेखि सेयर गरौं
डोजरले बाटो खन्दा ढुङ्गामा गणेश भगवान देखिएपछि, अनिवार्य भिडियो हेरि कमेन्टमा ॐ लेखि सेयर गरौं
डोजरले बाटो खन्दा ढुङ्गामा गणेश भगवान देखिएपछि, अनिवार्य भिडियो हेरि कमेन्टमा ॐ लेखि सेयर गरौं// कुमाखमा रहेको सिद्ध गुफा निकै रमणीय छ । स्थानीय बासिन्दा कर्ण चलाउनेले अवलोकन र पूजाआराधनाका लागि थुप्रै मानिस गुफामा आउने बताए । ‘हरेक गुफामा रहेका विभिन्न खालका आकृति असाध्यै सुन्दर छन्,’ उनले भने । स्थानीयले कुमाखमा रहेको गुफाबाट पठाएका कुकुरहरू बाँझकाँडाको मोख्ला र कालागाउँको थदरामा रहेको गुफाबाट निस्किएकाले यहाँका गुफा निकै लामा भएको अनुमान गरिन्छ । ‘बूढापाकाले गुफाको लम्बाइ पत्ता लगाउन ककुर पठाएको सुनाएका थिए,’ जिमालीका लीलाधर रेग्मीले भने, ‘तर, गुफाको ५० मिटरभन्दा तल कोही गएका छैनन् ।’ कुमाखको टुप्पोबाट १५ जिल्लाका भूभाग देख्न सकिन्छ । यहाँबाट भारतको रुपैडिहासम्म देख्न सकिन्छ । कुमाख पहाडमा उच्च पहाडी जंगलमा पाइने महत्वपूर्ण जडीबुटी, वनस्पति र फूल पाइन्छन् । त्यस्तै, दुर्लभ मानिएका चराचुरुंगी र जंगली जनावर पनि यहाँ पाइन्छन् ।
कुमाखमा दृश्यावलोकनका लागि ‘भ्यू–टावर’का रूपमा विकास गर्नसके आन्तरिक पर्यटनका साथै बाह्य पर्यटनको पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ । कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन यहाँ रहेको सिद्ध मन्दिर र त्यसदेखि केही तल रहेको जिमालीतर्फको समथर भूभागमा मेला लाग्ने गर्छ । मेलामा आसपासका विभिन्न गाउँका बासिन्दाले स्थानीय लोकसंस्कृति झल्कने टप्पा, सोरठी, पैसेरी, झाप्रे, सरिंगेजस्ता नाच प्रदर्शन गर्छन् । संरक्षण र पूर्वाधार निर्माण गरेर कुमाखलाई राम्रो पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । यो ठाउँ जादा आफ्नो रोग दुख अभाव नास हुने आम बिश्वास रहेको छ त्यसैले तपाईं नपुगे पनि एक सेयर गरेर भगवान प्रती आस्था राख्नुहोला ।
चारैतिर हरियालीले सजिएको यो मन्दिर दुई नदीको दोभानमा छ। यो मन्दिरमा कालीको मूर्तिबोहक अन्य देवी देवताको मूर्ति पनि छन्। दक्षिणकाली मन्दिर यहाँ केवल एक मन्दिरमात्र नभई वनभोजका लागि अत्यन्त रमणीय र मनोरञ्जनात्मक दृष्टिले भरिएको स्थल पनि छन्।
राजाहरू पनि यहाँ बर्सेनि वैशाखमा आफ्नो देवाली मनाउन आउँथे। यो शान्त वातावरणमा रमेको छ। त्यहाँ पर्यटन व्यवसाय पनि फस्टाउन सक्छ। यो मन्दिरमा बर्सेनि हजारौं भक्तजन आफ्नो मनोकाङ्क्षा पूरा गर्न आउँछन्। मूलत: दसैंको बेला यहाँ विशेष मेला लाग्छ।
दसैंको नवरात्रीमा यहाँ कैयौं भक्तजनहरू हाँस, कुखुरा राँगो, बोकाको बलि दिन्छन्। यो मन्दिर धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोटले धनी छ।पहिलेपहिले यो मन्दिरमा देवीकै मुखमा नरिवल फुटाइने गरेकाले देवीका मुखाकृति केही हदसम्म बचेको छ। माता दक्षिणकालीको दर्शन गर्नुहोस, तपाईले चाहेको सबै पूरा हुनेछ!! सेयर लाईक र कमेन्ट गर्न हेला नगरौ अनिष्ट हुनसक्छ ।
फलामको गेटले किच्दा बालिकाको मृत्यु
मोटो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? रातको समयमा भुलेर पनि नखानुहोस यि चिज